Vakio! Sokajy://www.knwautobody.com TAKIN'I fiheverana ny Ary toy ny toe-javatra mamela ny fampiasanao Sokajy://www.knwautobody.com.
Ny fahazoana na mampiasa ity Ndao ho anareo misolo tena fa manana MANONTOLO fahefana hiasa izy hamatotra izay TENANAO, ANY antoko fahatelo, ORINASA, OR fikambanana ara-dalàna, Ary ny fampiasanao sy / na fifaneraserana, Ary koa ny fanohizana ny mampiasa na mifandray, AMIN'NY NY SITE mahaforona VAKIO SY NY rehefa nanaiky ny fampiasana ireo teny ireo ary koa ny fifanarahana HAFA Mety lahatsoratra ao amin'ny NY SITE.
, Tamin'ny fijerena, Famangiana, NAMPIASA, Na fifandrindrana amin'ireo Sokajy://www.knwautobody.com OR tamin'izay Banner, POP UP, OR DOKAMBAROTRA IZAY hita eo amin'izy io, IANAO NO nanaiky ny fepetra voalazan'ny REHETRA IZAO FIFANEKENA politika sy NY Fitsipika NY Sokajy://www.knwautobody.com.
Sokajy://www.knwautobody.com manokana mandà ACCESS IZAY olona akory dia miafina ao amin'ny NY ANKIZY NY FIAROVANA Asa ONLINE fiainana manokana (CUP) OF 1998.
Sokajy://www.knwautobody.com tahirin-jo handà ACCESS HO olona na mpijery na inona na inona azo atao MAHAIZA MAMPISAINTSAINA. Eo ambanin'ny FIFANEKENA NY Fitsipika, Izay toe-javatra MANEKE HO AN'NY nijery, Sokajy://www.knwautobody.com avela ANGONY ARY STORE angon-drakitra sy Information for NY ZAVA-KENDREN'NY fanavakavahana SY HO AN'NY maro hafa fampiasana.
Dia izao: Ity FIFANEKENA fifanarahana mety hiova tsindraindray. Mpitsidika Manana AFFIRMATIVE DUTY, Ao anatin'ny NY fiheverana ny alalana miditra Sokajy://www.knwautobody.com, HO hiaro tena nilaza NY BY famerenana izany fiovana izany dia izao: Ity FIFANEKENA PEJY isaky ny HITSIDIKA Sokajy://www.knwautobody.com.
NATAON'I HO fepetram-pampiasana ho fifanarahana
Mpitsidika, mpijery, mpampiasa, mpanjifa, mpikambana, Affiliates, na ny mpanjifa, miaraka antsoina hoe Izao toy ny “Mpitsidika,” ny antoko ho fifanarahana ity. Ny habaka sy ny tompony sy / na ny mpandraharaha dia antoko ho fifanarahana ity, Izao antsoina hoe “Website.”
NAMPIASA NY vaovao avy amin'ny tranonkala ity
Raha tsy efa niditra ho any an-mazava voasoratra fifanarahana amin'ny tranonkala ity ho any amin'ny mifanohitra, mpitsidika, mpijery, mpanjifa, mpikambana, Affiliates, na ny mpanjifa tsy manan-jo hampiasa izany vaovao ao amin'ny toerana ara-barotra na-bahoaka; tsy manan-jo izy ireo mba handefa azy io, handika izany, afa-tsy, pirinty izany, amidy, na mamoaka misy ampahany ny votoatin'ny tranonkala ity. Ny fahazoana ny votoatin'ny tranonkala ity, ianao miombon-kevitra amin'ny toe-javatra ity ny fidirana ary manaiky fa misy ny fampiasana tsy nahazoan-dalana no tsy ara-dalàna sy mety manaiky anao sivily na heloka bevava sazy. Indray, Visitor tsy misy na inona na inona zo hampiasa ny votoatin'ny, na ny ampahany aminy, ao anatin'izany ny angona, tsy hita maso pejy, mifandray pejy, fototra kaody, na hafa fananana ara-tsaina ny toerana dia mety misy, na inona na inona antony na inona na inona, na fampiasana na inona na inona. Ho fankasitrahana ny amin'ny zava-misy fa mety ho sarotra ho refesina ny tena fahasimbana nateraky amin'ny fandikan-dalàna ny fanomezana ity, Visitor manaiky mba hanonerana ny tompon'ny Sokajy://www.knwautobody.com amin'ny noravàna ny fahavoazana eo amin'ny habetsaky ny Etazonia. $100,000, na, raha azo kajy, ny tena fandaniana sy ny tena fahasimbana solon'ny tapaka fanomezana ity, handefasana dia lehibe. Visitor alàlana izay na izy mahatakatra fa ny fanekena fandaharana io dia toe-piainana misy fahazoana Sokajy://www.knwautobody.com ary ny fahazoana Sokajy://www.knwautobody.com mahaforona fanekena.
TRANONKALA NA tompon'ny zo hampiasa, Amidio, LOHA HEVITRA RAKETIN'NY torio tranonkala ity
Ny habaka sy ny ao anatiny, na dia nanana fahazoan-dalana avy amin'ny tranonkala ny tompony. Ara-nofo ao amin'ny tranonkala dia tsy maintsy heverina ho format manan-tompo sy ny zon'ny mpamorona. Mpitsidika dia tsy manana zo na inona na inona ao an-toerana afa-po. Fampiasana ny tranonkala afa-po na inona na inona antony dia tsy ara-dalàna, raha tsy izany dia atao amin'ny mazava fifanekena na ny fahazoan-dalana avy amin'ny vohikala.
HYPERLINKING NY SITE, CO-BRANDING, “Hanisy” Raha niresaka mikasika SITE SY VOARARA
Raha tsy mazava nahazo lalana avy namany Sary, tsy misy olona afaka rohibe toerana ity, na ny ampahany aminy, (ao anatin'izany ny, fa tsy voafetra ho, logotypes, famantarana, marika na ny zon'ny mpamorona ara-nofo) ho azy ireo noho ny antony. Koa, ianao dia tsy navela Reference ny URL (namany Sary adiresy) taona ity na tsy ampy taona ity na inona na inona barotra na tsy barotra haino aman-jery tsy nahazoana alalana mazava avy aminay, na dia ianao avela 'sisiny’ ny toerana. Anao manokana manaiky ny hiara-miasa amin'ny Website mba hanala na de-mampihetsika misy toy izany asa, ary ho mendrika ny fahavoazana rehetra nateraky tsy nanitsakitsaka fandaharana ity. Ho fankasitrahana ny amin'ny zava-misy fa mety ho sarotra ho refesina ny tena fahasimbana nateraky amin'ny fandikan-dalàna ny fanomezana ity, ianao manaiky mba hanonerana ny tompon'ny Sokajy://www.knwautobody.com amin'ny noravàna ny fahavoazana eo amin'ny habetsaky ny Etazonia. $100,000, na, raha azo kajy, ny tena fandaniana sy ny tena fahasimbana solon'ny tapaka fanomezana ity, handefasana dia lehibe. Ianao mitaky fa mahatakatra fa manaiky io fandaharana io dia toe-piainana misy fahazoana Sokajy://www.knwautobody.com ary ny fahazoana Sokajy://www.knwautobody.com mahaforona fanekena.
DISCLAIMER HO AN'NY LOHA HEVITRA RAKETIN'NY SITE
Sokajy://www.knwautobody.com mandà misy andraikitra ho amin'ny marina ny votoaty fisehoany amin'ny, mifandraika amin'ny amin'ny, na ny voalaza ao amin'ny Sokajy://www.knwautobody.com. Mpitsidika mihevitra mety rehetra mifandray amin'ny fijerena, famakiana, mampiasa, na fianteherana amin'ny vaovao ity. Raha tsy efa namorona ny mazava raha tsy izany fifanekena ho amin'ny mifanohitra aminay, Tsy manan-jo ny miantehitra amin'ny misy vaovao mirakitra etoana toy ny marina. Isika dia tsy mba toy izany fiantohana.
DISCLAIMER kosa hanisy ratsy nahatonga ao amin'ny solosaina NA AVY rindrambaiko fifandrindrana amin'ireo tranonkala ity na ny LOHA HEVITRA RAKETIN'NY. Mpitsidika hoatran'ny ATAHORANA REHETRA NY na virosy, Kankana, Dratsy na lafin-javatra.
Tsy andraikitra isika dia mihevitra fa simba ny ordinatera na rindrambaiko ny vahiny na ny vahiny taty aoriana olona mifandray amin'ny fehezan-dalàna manimba na tahirin-kevitra izay lasa tsy nahy ny mpitsidika ny solosaina. Indray, mpitsidika fomba fijeriny sy ny interacts amin'ny ity toerana, na sora-baventy na pop-dehibe na ny dokam-barotra aseho eo, amin'ny ny mety.
DISCLAIMER kosa hanisy ratsy vokatry ny Downloads
Visitor alaina vaovao avy amin'izao toerana ity ny mety. Website mahatonga tsy fiantohana izay alaina maimaim-dratsy ireo solosaina kaody, ao anatin'izany ny, fa tsy voafetra ho, virosy sy ny kankana.
Mahasakana NY madio
Amin'ny alalan'ny fijerena, mampiasa, na fifandrindrana Na izany na tsy izany koa ity toerana, anisan'izany ny sora-baventy, dokam-barotra, na pop-dehibe, Downloads, ary ho toy ny toe-ny vohikala mba hamela ny fijerena ara-dalàna, Visitor mandrakizay waives zo rehetra filazana ny fahavoazana ny misy sy ny famaritana rehetra mifototra amin'ny causal misy anton-javatra na inona na inona azo atao vokatry ny ratsy, na manao ahoana na be mahatsiravina, na ara-batana na ara-pihetsehampo, foreseeable na unforeseeable, na manokana na ara-barotra eo amin'ny natiora. Fa misy juridictions izay mety izao hamela ireo exclusions ny ambony indrindra madio dia tsy mihoatra ny vola naloan'i anao, raha misy, noho ny fampiasana ny tranonkala na ny fanompoana.
Fanampin'izany, ianao tsy mba manaiky mendrika mitana antsika ho misy fahavoazana mifandraika amin'ny olana mihoatra noho ny fanaraha-maso, anisan'izany fa tsy voafetra ho, asa Andriamanitra, ady, fampihorohoroana, fikomiana, korontana, heloka bevava, loza araka ny natiora, fanelingelenana ny pifandraisana na ny foto-drafitrasa, asa na ny tsy fahampian fikorontanana (anisan'izany ny fitokonana tsy ara-dalàna), ny tsy fahampian ny fitaovana, ary hetsika hafa izay tsy ao ny fanaraha-maso.
Mpitsidika dia manaiky fa ao ny zava-nitranga dia mahatonga fahavoazana ho antsika na antoko fahatelo noho ny na momba ny fampiasana ny Sokajy://www.knwautobody.com, Visitor no indemnify antsika ho, ary, raha azo ampiharina, hiaro antsika hanohitra, misy fanambarana ho an'ny fahasimbana.
Tsy misy fanampiny filazana na inona na inona noho ny antony dia takiana mba homena an'i Visitor sy Visitor mazava dia mendrika ny fahatakarana fa ny zo mahita dia famelana ho toy ny fepetra ho an'ny fahazoan-dalana mba hijery na mifandray amin'ny ny tranonkala.
Ao anatin'ny ny fiheverana fa ny Website dia mitaky ny fijerena, mampiasa na fifandrindrana amin'ireo tranonkala ity, Visitor manaiky ny hampiasa sisiny fanelanelanana na inona na inona filazana, fifandirana, na ny adihevitra (“FITARAINANA”) na inona na inona (na amin'ny fifanarahana, tort na raha tsy izany) fampitahorana miseho avy amin'ny na mikasika ny fividianana ity, vokatra ity, anisan'izany ny fampanoavana olana, olana fiainana manokana, ary amin'ny lafiny fampiasana olana.
Fanelanelanana dia ho tarihin'ny pursuant ny fitsipiky ny Fikambanana Amerikanina Mpanelanelana izay any vokany eo amin'ny daty ny fifandirana dia atolotra ny American Mpanelanelana Fikambanana. Information momba ny American Mpanelanelana Fikambanana, ny fitsipika, ary ny teny dia azo raisina eo amin'ny American Mpanelanelana Fikambanana, 335 Madison Avenue, Floor 10, New York, New York, 10017-4605. Nandre no hitranga ao an-tanàna na faritra ny tompon'ny Sokajy://www.knwautobody.com.
Tsy tranga dia ny mpijery, mpitsidika, member, famandrihana na ny mpanjifa manan-jo ho any amin'ny fitsarana, na manana mpitsara fitsarana. Mpijery, mpitsidika, member, famandrihana na ny mpanjifa dia tsy manana zo manao mialoha ny fitsarana afa-tsy hita araka ny voalaza ao amin'ny fitsipika; dia tsy manan-jo handray anjara amin'ny maha-solontenan'ny na ny mpikambana ao amin'ny kilasy misy claimants momba misy foto-kevitra milaza ny fanelanelanana; ny fanapahan-kevitry ny mpizara no ho farany, ary manan-kery amin'ny zon'ny voafetra ny antso.
Ny antoko manjaka dia reimbursed amin'ny antoko hafa na inona na inona sy ny vola lany rehetra mifandray amin'ny fanelanelanana ny fifandirana, anisan'izany ny mpisolovava saram, famoriam-bola saram, fanadihadiana saram, saran-dàlana.
Fahefana SY toerana
Raha misy olana ny amin'izany fividianana ho entiny eo anatrehan'ny fitsarana, mialoha- na taorian'ny fanelanelanana, Mpijery, mpitsidika, member, famandrihana na mpanjifa dia manaiky fa ny hany mba sy araka ny tokony ho juridiction mba ho ny fanjakana sy ny tanàna nanambara tao amin'ny fifandraisana vaovao ny aterineto tompon'ny eto raha tsy misy fanamarihana manokana. Ao ny zava-nitranga izay Litigation dia ao amin'ny fitsarana federaly, ny tokony kianja ho fitsarana federaly ny akaiky indrindra ny tompon'ny Sokajy://www.knwautobody.com ny adiresy.
Mpijery, mpitsidika, member, famandrihana na ny mpanjifa dia manaiky fa ny azo ampiharina ny lalàna mba ho ampiharina dia, amin'ny toe-javatra rehetra, ho fa ny toetry ny ny tompon'ny Sokajy://www.knwautobody.com.
Ny mpivarotra vokatra ity no:
Fifandraisana Email: admin@knwautobody.com,Zo rehetra voatokana.